Yunnan Xinping Sports Forest Park Nalka Mashruuca
Tayada iftiimintu waa tilmaame muhiim ah heerka qalabka ciyaaraha. Kubadda cagta, iftiinka garoomada xirfadleyda ah xitaa waa lagama maarmaan. Dhawaan, UNIKE waxay si guul leh u dhameystirtay Xinping County Sports Forest Pa ...
Mashruuca Dayactirka Nalka Garoonka Xiangtan
Dhawaan, Hunan Xiangtan Indoor Stadium dayactirka mashruuca dayactirka wuxuu si guul leh ku dhaafay aqbalaada waxaana si rasmi ah loo adeegsaday, taasoo si heer sare ah loo aqoonsaday ayna xaqiijiyeen macaamiisha. UNIKE waxay siisaa xalka iftiinka caqliga oo dhameystiran Xiangtan Indoor Stad ...
WAA MAXAY SMD LED?
Qalabka Μount Surface, Diodes Light Emited The SMD LED waa culeys miisaan yar oo fudud oo ku lifaaqan cusbada epoxy. Kuwani waxay bixiyaan dhalaal xad dhaaf ah iyadoo la ilaalinayo isticmaalka tamarta hooseeya marka la barbar dhigo noocyada kale ee nalalka (tusaale ...